- Manaja fotoana be ry zareo, manaja lalàna na ireny fiepitana piéton ireny na ireny lalana tsy azon'ny fiarakodia aleha raha ianao irery no anatin'ny fiara, tsy maintsy misy olona roa farafaharatsiny, ialana amin'ny hoe samy mitondra ny fiarany ny olona, fa mba mitambatambatra, na mandeha bus, ampihena ny fitohanana sy ny loto, misy manisy mannequin na poupée gonflable eo amin'ny devant, fa avy dia iantsoan'olona polisy.
- Raha tara amin'ny rendez-vous ianao, dia tsy lagy aminao izany izy, fa raha 30min no fepotoana efa natokany ho anao, ka tara 20min ianao, na hialatsiny betsaka eo, dia 10 min zany sisa no hiresahanao aminy, vita izay dia faranany ny resaka. Tara tanteraka ilay fotoana moa ianao, dia tsy mandray anao intsony izy, maka rdv hafa indray.
- Raha maromaro no tonga hivory, dia vao manomboka, dia ny WC (restroom no hiantsoiny azy fa tsy misy mahay izany water closed na WC zany) aloha no atorony voalohany ny toerana misy azy, satria fantany fa olombelona tsy akoho, dia mba samy manala zay mavesatra aloha, amin'izay mifantoka tsara amin'ny fihaonana ny rehetra.
- Misotro thé glacé betsaka ry zareo, ka raha manontany izy the or coffee, dia thé glacé zay.
- Tandremo fa sarotiny be ny Amerikanina amin'ny fanararaotana vehivavy, sexualité, aza mba ratsy resaka, na mikitikitika, misy aza rehefa vehivavy tokana anaty ascenseur dia tsy miditra ao ny lehilahy sao lazainy nikasika azy. Mety tsaroantsika ny nahavery an'i DSK, ilay saika ho kandida ho filoham-pirenena Frantsay, izay tsy hay aloha raha tena nanararoatra ilay mpanadio trano. Amin'ireny hôtel ireny, dia miantso mafy ireo mpanadio trano alohan'ny hiditra ny efitrano misy anao satria izy manana clé passe.
- Tips na pourboire: Zavadehibe io rehefa mandeha restaurant, ny azy ny serveurs na serveuses dia kely karama, na tsy mandray karama mihitsy, fa 10% n'ny facture na ny addition no tokony apetrakao eo ambony latabatra rehefa vita sakafo, alainy baraka, takiany imason'olona ianao raha kahihitra eo. Any amin'ny service rapide na Macdo, tsy misy Tips, fa samy manatitra ny plateau avy nihinanany fotsiny.
- Zava-dehibe any ny fanajana ny zon'ireo olona misy fahasembanana, ny lalana rehetra, ny feu rouge, ny biraom-panjakana rehetra, ny WC dia azo ampiasain'ny olona manana fahasembanana avokoa, tena potehan'ny Etat fédéral mihitsy ireo birao sy fotodrafitrasa tsy manaja an'ireny fenitra ireny, toy ny rampe hiakaran'ireny chaise roulante ireny, ny habehan'ny varavarana...
- Matanjaka be ihany koa any ny fikambana'ireo zoky olona na 3ème âge, tena manao voyage be ireo olona efa zokiny ireo, ary mandany vola aman-karena mihitsy. Manaraka akaiky politika ireo, izay tohanandreo dia mety ho mora lany.
- Fanajana sainam-pirenena, tena sarobidy aminy io, ary feno sainam-pirenena ny azy ny tanàna, misy mihitsy aza asiana anarana ny tsatoby hoe avy amin'ny fianakaviana anona, na anona, dia milahatra mandravaka ny tanàna ny sainam-pirenena marobe.
- Tena ambony any ny fahalalahana, mahazo miteny sy maneho hevitra daholo, afaka manangana radio sy télé any na fikambanana mpanao baskety aza.
- Ny County na Comté na Kaominina any no fototry ny fampandrosoana.
- Tsy misy menatra mampiseho fa manana izy, tsy tia manao zavatra kely izany ireo, na ny fiarakodia aza dia mandehadeha eraky ny tanàna, ny fiarakodia avo be efa ho 2m ny haavon'ny kodiarana.
- Azo vidiana ohatran'ny mividy mofo ny basy, mitondra karapanondro dia mahazo, 100$ mahazo kalaky iray occasion.
- Tsy mangalatra TVA izany ny mpivarotra, matahotra fanjakana, na mpivarotra amoron-dalana aza dia mandoa hetra, ny azy koa tsy lafo fa 5-7% arakaraky ny Etat ny TVA.
- Mivavaka be ny Amerikanina maro, misy ny tsy mivavaka, fa mifanaja, mbola betsaka kosa ireo manavakava-bolokoditra, fa raran'ny lalàna, ary enjana eo ny azy ny sazy.
- Tsy mihoatra ny haavon'ny Tilikambon'ny Capitole na ny Antenimieram-pirenena ny haavon'ny trano rehetra miorina eo an-tanàna, afatsy ao New-York misy bulding avo be, ary miainga eo amin'ny Capitole hatrany ny fanisana ny lalana, ny adresse trano, 1-west ohatra, dia lalana voalohany miala eo amin'ny Capitole avy ao andrefana. Raha very ianao izany dia jereo fa tazan-davitra ny Capitole, dia any zany ny 0-0 dia manisa ny arabe izay mahitsy daholo any (Cartésien). Io izany no ametrahany fa ny Antenimiera no manampahefana any.
- Ny azy ny restaurant rehetra dia misy toerana kely azo hiràna sy andihizana avokoa. Misy ny restaurant mahazo mihinana izay laninao amin'ny vidiny tokana, ohatra 5$, misy indray maka izay tianao, dia lanjaina, ka mandeha amin'ny kilao ny vidiny.
- Misy mpivarotra izay entana mitovy prix, dia azonao alaina ny faharoa gratuit.
- Ny anglais américain dia hafa ny accent amin'ny British, ary ry zareo kamo anakatra ny tianao lazaina raha tsy mipetraka tsara ny accent. Ry zareo dia tsy mahay géographie internationale izany. Chine, Japon no tena fantany.
- Tsy misy pain français any, vitsy ny boulangerie mivarotra mofo, ny pomme frite hafa ny ilazany azy (french fries), tsy fantany izany Mi-sao izany.
Mirary soa izay mipetraka any na izay mikasa ny andeha any, aza adino fa 110Volt ny courant any fa tsy 220V.
Izay tsy afaka mandeha dia misy hisitonana lesona izay mety misy azo ampiharina eto amintsika.